Cheap soo saaraha Shiinaha CNC caadadii steel carbon warshad qaybo warshad iyo alaab | Ouzhan
Soo saaraha Shiinaha qaybo ka mid ah birta birta ah ee birta la shiiday
Birta kaarboonku waa bir bir-karboon ah oo leh kaarboon ka kooban 0.0218% ilaa 2.11%. Sidoo kale loo yaqaan birta kaarboon. Guud ahaan, waxa kale oo ku jira qaddar yar oo silikoon ah, manganis ah, baaruud ah, iyo fosfooras. Guud ahaan, markay ka sarreeyaan kaarboon-ka ay ku jirta birta kaarboonku, way sii adkaataa adkaanta oo way sarreysaa awoodda, laakiin waxay hoos u dhigtaa baaxadda.
Mashiinka kaarboonka birta ee kaarboonku leeyahay waxay leedahay codsiyo kala duwan waxayna ku habboon tahay inta badan qaybaha farsamada. Nalalka CNC waxay farsameyn karaan qaababka jirka ee wareegaya. Qaybo ka mid ah axdi qarameedka birta kaarboonka ah, maranku wuu go'an yahay, mashiinka wareejiya xawaaraha sare ee wareejiya ayaa loo isticmaalaa inuu ku dhaqaaqo maranka banaan si uu u gooyo qaababka iyo astaamaha loo baahan yahay. Xarunta wax lagu shiido qaybaha wax lagu shiido ayaa aad ugu habboon in lagu farsameeyo noocyada shaqada sida qaybaha qalooca iyo qalabka qalajinta ee qalooca. Qaybaha qalooca ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa aagga warshadaha, sida garbaha marawaxadaha, qalabka wax lagu iibiyo ee maraakiibta, wax soo saarka warshadaha leh dusha sare ee silsiladaha silsiladda leh, iwm.
Faa'iidooyinka Shanghai Ouzhan qaybo bir la shiiday:
- Awood gaar ah
- Ma sahlana in miridhku dhaco
Qalabka mashiinka birta birta ah ee qalabka wax lagu kariyo
Waxyaabaha Bir yar oo kaarboon ah, birta kaarboon dhexdhexaadka ah, birta kaarboon sare, birta goynta bilaashka ah ee dib loo cusbooneysiiyay, birta goynta bilaashka ah iyo dib-u-soo-celinta fosfooraska, iyo birta manganese sare ee aan baaruudda lahayn (waxyaabaha manganiska ka badan 1%)
Daaweynta dusha sare Daaweynta dusha sare ee birta kaarboonka ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudahaaga, sida toogashada toogashada, ciideynta, biyaha cadaadiska sarreeya, soo qaadista iyo wixii la mid ah.
Xakamaynta tayada Laga soo bilaabo qalabka illaa baakadaha, dhammaan nidaamka isku-duwidda mashiinka cabbiraadda si adag ayaa loo xakameeyaa.
Isticmaalka Waxaa loo adeegsaday warshadaha culus, warshadaha fudud, warshadaha baahiyaha maalinlaha ah, qurxinta dhismaha iyo warshadaha kale
Hore: Qaybaha birta ee kaarboonka CNC
Xiga: Qaybo ka sameysan qashin kaarbooni ah oo ka sameysan qaybo mashiinno ah